Cathay Pacific Airways Inodzokera kuPittsburgh International Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Cathay Pacific Airways Inodzokera kuPittsburgh International Airport
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hong Kong Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Mukuyedza kuunza huwandu hwekutakura zvinhu pazvinogoneka uye nekubatsira kutsigira pasi rese cheni, Cathay Pacific akagadziridza ndege dzeBoeing 777-300ER kuti dzienderane nezvinodiwa zvekutakura.
Dzazvino ndege dzenyika dzepasi rose kuti dzishandise paPIT's cargo kumhanya.
Hong Kong-based carrier ichashandira Pittsburgh International Airport kusvika pakupera kwegore.
Mapuraneti anosvika neMuvhuro neChishanu uye osimuka zuva rinotevera.
Cargo mashandiro pa Pittsburgh International Airport (PIT) unowana imwe yekuwedzera nekudzoka kwendege mbiri dzevhiki kubva Cathay Pacific Airways.
Cathay Pacific inotanga kushanda muna Nyamavhuvhu 2, 2021, neyavo Boeing 777-300ER ndege dzevapfuuri dzakashandurwa kutakura zvinhu, nezvirongwa zvekushandira PIT kusvika pakupera kwegore. Mapuraneti anosvika neMuvhuro neChishanu uye osimuka zuva rinotevera. Cargo inboard iyo ndege ndeyeye indasitiri yehembe.
Ndege ichatanga nendege kubva kuHanoi, Vietnam, ichimira paCathay Pacific's Cargo Terminal kuHong Kong International Airport isati yabhururuka isingamire kuPIT. Cathay Pacific pakutanga akatanga basa rekutakura zvinhu kuPIT munaGunyana 2020 aine 20 ndege.
Kugona kwePIT kukurumidza kuburitsa zvinhu nekuzviisa mumarori ekuendesa ndechimwe chezvikonzero izvo Cathay Pacific uye mutakuri wekutakura zvinhu Unique Logistics vakasarudza kudzoka kune yavo yazvino nhumbi yekutakura.
"Nzvimbo yePittsburgh International Airport, rutsigiro rwemunharaunda, uye mashandiro ekushanda zvinopa nharaunda yakanaka yekuti isu tishande sevhisi kubva kuVietnam naCathay Pacific kuenda kunzvimbo yePittsburgh," akadaro Marc Schlossberg, Executive Deputy President weUnique Logistics. "Unique Logistics inobvumidzwa kushanda nendege dzakadai dzinosvika zana nemakumi maviri nendege dzakasiyana siyana kubva kuAsia kuenda kuPIT nedzimwe nhandare muUnited States kwe120 yasara, ichiwedzera huwandu hwevatakuri vekuUS vanokosha."
"Dzimwe ndege dzinogona kuwedzerwa kuPIT sezvo oparesheni ichiwedzera," akawedzera Schlossberg.